I-Apple ithatha amanqaku kwiMicrosoft? | Martech Zone
NgoLwesibini, Juni 3, 2008 NgeCawa, Agasti 23, 2009 Douglas Karr
Kubonakala ngathi veki nganye ndikhuphela olunye uhlaziyo lwenkonzo yeVista. Kutshanje, iVista yayinePakeji yeNkonzo kwangolo suku apho iApple yahlaziya i-10.5.3 ngo-OS X Leopard. Ukusukela uhlaziyo kwiNgwe, bendineetoni zemicimbi ndisebenzisa isikhangeli ... nokuba yiSafari okanye yiFirefox.
Namhlanje ndithathe isigqibo sokufaka iSafari kwakhona ukuze ndibone ukuba ndingayilungisa na kube kanye. Ukuqala kwam ukufakela, ndadibana nale:
Ke benze uhlaziyo kodwa abakuhoya ukuhlaziya ufakelo lwabo lweSafari ukuyivumela? Owu othandekayo uApple, mhlawumbi kuya kufuneka uhlale umncinci. Isimanga kukuba ndisebenzisa iFirefox ngokufana kule MacBookPro ngoku ukuba ndijonge ngokukhawuleza umnatha.
tags: amakhadi ekrisimesieCommerceinfographic yeholideIinguqulelo eziphathwayoiibhukumaka zentlaloAmanqanaba okuguqula iipilisiUmphathi wegama
Juni 3, 2008 ngo-9: 51 PM
Ndinengxaki efanayo. Ndazise ukuba uyayilungisa!
Ngaphandle kokuthetha, bendihleli ndisebenzisa i-pc yam mva nje. Ndisebenzise iMac kuphela ukuba ilungele ntoni na… iinjongo zoyilo.
Juni 4, 2008 ngo-9: 21 PM
Ndifumene isicelo esinye esibonakala ngathi siyaphikisana kwaye kunjalo Ukufihlwa kuka-Orbicule. Ndabhala inkxaso yabo ndasusa ngokupheleleyo isicelo kwaye kubonakala ngathi ndenza ngcono. Kubi kakhulu, ndiyaluthanda ukhuseleko olubonelelwa sisicelo sabo. Ndabacela ukuba bandibhale xa belungisa le nto.
Ndicinga ukuba inokuba yeyenye imicimbi, kodwa le yayiyeyona nto iphambili.